News - Sida loo doorto jaakad la isku halleyn karo, waa inaan iska ilaalinaa qaladaadkan
Sida loo doorto jaakad la isku halleyn karo, waa inaan iska ilaalinaa qaladaadkan
Sida loo doorto jaakad la isku halleyn karo, waa inaan iska ilaalino khaladaadkaas
Dad badan ayaa og inay jaakadaha si gaar ah loogu talagalay xiisaha cayaaraha dibadda. Si kastaba ha noqotee, jaakaduhu waa dhar gaar ah oo shaqeynaya oo leh shaqooyin aan biyuhu lahayn iyo kuwo aan dabeyl lahayn. Dadka intooda badani ma yaqaanaan sida loo xusho. Waxay leeyihiin naqshado shaqo oo kaladuwan oo loogu talagalay deegaanno kaladuwan. Dadka aan aqoon waxay yeelan doonaan dhowr is fahan darro, aynu eegno.
Faham la'aan 1: Ka sii diiran ayaa ka sii fiican
Xaaladdaan guud ahaan waxaa lala kulmaa xilliga qaboobaha. Kaqeybgalka ciyaaraha isboorti bannaanka xilliga qaboobaha, xidhashada qaro aad u wanaagsan ayaa u wanaagsan diirimaad, laakiin waxay noqon doontaa mid xadidan. Xaaladaha guud ee cimilada, ama marka socodka lagu fuulayo ama banaanka lagu fuulayo, suudh-barafku aad ayuu u culus yahay. Xaaladdan oo kale, dadka badankood waxay dooran doonaan jaakad ama jaakad laba-geesood ah oo kala-goyn kara, taas oo aad ugu habboon in la xidho oo laga baxo oo ku habboon isboortiga dibedda.
Isfaham la’aanta 2: Ka sii qaalisan ayaa ka sii fiican
In kasta oo ay jirto mabda 'ah in "raqiis uusan fiicnayn," jaakada qaaliga ah ma aha tan ka fiican. Dooro jaakada kuu keeni karta difaac iyo caawin weyn. Guud ahaan, waxaad dooran kartaa noocyo caan ah oo caan ah, sida North Face, Northland, iwm. Jaakadahaani noocyadu waxay leeyihiin qiimayaal kala geddisan waxaana guud ahaan loogu talagalay waxqabadyada xiisaha leh ee ka jira deegaanno qallafsan. Markii aad wax iibsaneysid, in qiimuhu qaali yahay iyo in kale ma tilmaamayso in jaakaddu fiicantahay iyo in kale. Dooro iyada oo la raacayo waxqabadkaaga.
Faham la’aanta 3: Howlaha oo dhameystiran
Cayaaraha jawiga kaladuwan waxay lahaan doonaan jaakado shaqeynaya oo kala duwan. Jaakadaha aan xirano waa inay noqdaan kuwo wax ku ool ah. Ha u arkin shaqooyinka dadka kale oo ha rabaan. Hadday tahay uun dharka caadiga ah ee magaalada, looma baahna in la doorto Xirfadle, biyi-aan-celin, dab-damis, jawi neef-qaadasho ah iyo jaakad buurta diiran, marka loo eego xaaladaada, ha ku indho-sarreysin kuwa kale hana ku daydo kuwa kale.